ओलीलाई संकेत गर्दै रावलले प्रश्न गरे- विधि, विधान र पद्धति मिच्नेहरूले भट्टबाट राजनीतिक नैतिकताको केही शिक्षा लिने कि ?
काठमाडौँ २५ जेठ । नेकपा एमाले नेता डा. भीम रावलले सुदूरपश्‍चिम सरकारबाट राजनीतिक नैतिकताको शिक्षा लिने सकिने बताएका छन् । आज प्रदेशमा लिइएको विश्वासको मतमा माओवादी सरकारलाई माधव नेपाललेक ाँध थापेर जोगाइदिएपछि फेरि एक पटक माओवादीका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
विश्वासको मत पाएसँगै नेता रावलले ट्वीटर मार्फत विधि, विधान र पद्धति मिच्नेहरूले भट्टबाट शिक्षा लिने कि भन्‍दै पश्न गरेका छन् । पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी ओलीको खुलेरै विरोध गरेका रावलले ओलीलाई संकेत गर्दै विधि, विधान र पद्धति मिच्नेहरूले उहाँबाट राजनीतिक नैतिकताको केही शिक्षा लिने किरु भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन् , ‘नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सुदूरपश्‍चिम सरकारबाट राजनीतिक नैतिकताको शिक्षा लिने सकिने बताएका छन् । सुदूरपश्‍चिमका मुख्‍यमन्‍त्री त्रिलोचन भट्टले विश्‍वासको मत लिएपछि सामाजिक सञ्‍जाल ट्वीटरमार्फत विधि, विधान र पद्धति मिच्नेहरूले भट्टबाट शिक्षा लिने कि भन्‍दै प्रशन गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा जेठ २१ गते उठेपछि जेठ २५ गते नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरी सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुभएकोमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टजीलाई हार्दिक बधाई१ु उनले लेखेका छन्, ‘विधि, विधान र पद्धति मिच्नेहरूले उहाँबाट राजनीतिक नैतिकताको केही शिक्षा लिने कि’ ?